'लक्का जवान' वैशाख २३ देखि
धरान । हास्य विधामा बनेको चलचित्र ‘लक्का जवान’ बैशाख २३ गते देखि देशैभरि लाग्ने भएको छ । चलचित्रका निर्माता तथा हास्यकलाकार शिवहरि पोडेलले चलचित्र गाउँ घरमा भएको कथा बस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको बताए । शुक्रबार धरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चलचित्रमा ४० प्रतिसत कलाकारहरु हास्य कलाकारहरु रहेको उनले बताए । चलचित्रको कुल लागत रिलिज हुने दिन सम्म २ करोड ४० लाख पुगेको उनले बताए । चलचित्र निर्माणमा धेरै मेहेनत गरिएकाले हास्य विधामा उत्कृष्ट चलचित्र बनेको उनले बताए । उनले भने, फिल्मको गितहरुमा पनि धेरै मेहनत गरेका छौं, एउटा गितमा १ सय २५ देखि ८० जना कोरस कलाकार समेत रहेका छन् ।’ चलचित्
धरान । ‘अनुहारको चाउरी छिप्पिंदै गरेको आमाको सहारा हेरें । कुप्रिएको ढाड सोझ्याउने पटुका सकिएर झन कुप्रो हुँदै गएको देखें । मलाई काखमा राखेर को खाइ ? को खाइ ? भन्दै आधा पेट काटेर आमाले ख्वाएको दिन सम्झेर ल्याएँ ।’ ‘सिमेन्टीको बजारमा अनगिन्ती सपना बोकेको छुस्स अनुहार लिएर विदेशिएँ । वर्षाको मुसलधारे धार घरको छानाबाट झर्दा ‘टाल्छु’ भनी हजार कोसिस गर्दा पनि झन रिनको भारी थपिएपछि, ‘हामी मात्र भोटर हो’ भन्ने बुझेपछि, हरियो पासपोर्ट बोकेर आकाशमा उड्दै गर्दा निकै ठूलो सास फेरेको थिएँ तर, पचास डिग्री घाममा बेल्चा हान्दाहान्दै सास मात्र फेर्न सकें तर लिन सकिन
काठमाण्डौं / गोपिकृष्ण मुभिजले ओम, नमः र शिवाय सिनेमा हललाई सञ्चालनमा ल्याएको छ । चावहिलको गोपिकृष्ण नगरस्थित गोपिकृष्ण मुभिजले चैत ११ गते शुक्रवारदेखि ओम, नमः तथा शिवाय सिनेमा हललाई सञ्चालनमा ल्याएको हो । मुभिजले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सो हल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी गराएको हो । ‘नेपाली चलचित्र क्षेत्रको श्रीवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सफल भएको सिनेमा हल गोपिकृष्ण मुभिज प्रालि अहिले गोपिकृष्ण सेन्ट्रल कम्प्लेक्सका रुपमा विस्तारित हुँदै गरेको सर्वविदितै छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ – ‘नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण हबको रुपमा रहेको गोपिकृष्ण मुभिजल
धरान । इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा पर्ने कन्याम पर्यटकको लागि आकर्षक गन्तव्य स्थल त छँदैछ यो सँगै कन्यामले अर्को परिचय बनाएको छ । घुम्न जानेहरुका लागि कन्याम पछिल्लो समय टिकटक बनाउने स्थलको रुपमा परिचित बन्दै गएको छ । झापाको विर्ताबोडबाट ४७ दशमलब २ किलोमिटरको दूरीमा पुग्न सकिने कन्याममा विभिन्न प्रकारका पहिरन लगाएर टिकटक बनाउनेको घुइचो लाग्ने गरेको हो । इनरुवा नगरपालिका घर भएकी सेविका खनाल इलामको कन्याम अत्यन्तै रमणीय स्थल भएको सुनाउछिन् । पेशाले नर्स समेत रहेकी उनले इलाम पुग्दा साथीभाईसँग टिकटक बनाइरहन मन लाग्ने बताइन् । उनले भनिन्–‘स्वर्गको परीजस्तो देखिने यो स्थानमा गएपछि जो क
माया, प्रेम, पिरती अनि आत्मियताले भरिएको मायाको दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे सोमबार विश्वभर मनाइदैन । चिसो मौसमले अझ साथ छोडी नसक्दा फेब्रुअरी महिनाको यो न्यानो दिन आउँदा धेरै प्रेमिल जोडीहरु उत्साहित भइरहेका छन् । कसैलाई आफूलाई मनपर्ने मानिसलाई प्रेम प्रस्ताव गर्ने हतारो होला भने कसैलाई आफ्नो प्रियजनसँग स्तरीय समय बिताउन योजना बनाउने उत्साह हुनसक्छ । प्रेमी जोडीले मायाका भावनाहरु सँगसँगै आकर्षक उपहारहरु साटासाट गर्ने चलन पनि यस दिनको विशेषता हो । भनिन्छ नि उपहार र पुरस्कार सबैलाई मन पर्छ । झन् आफ्नो प्रियजनले दिने आकर्षक उपहार त मुटुको नजिक हुने गर्दछ । हुन त आफ्नो प्रियजनलाई चोखो मनले जे उप
गरिमाको खुल्ला बाल एकल नृत्य
धरान । गरिमा डान्स सेन्टर धरानले सरस्वती पुजाको अवसरमा आईतबार खुला बाल एकल नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ । धरान ९ आचार्य लाईन स्थीत डान्स सेन्टरमा सम्पन्न प्रतियोगिताको सिनियर गु्रप तर्फको प्रथम बरदान तामाङ, दोस्रो कृष्टिना राई र तेस्रो गौरव श्रेष्ठ भएका छन् । यसैगरी जुनियर गु्रप तर्फका प्रथम प्रिया राई, दोस्रो खिम्दुङ्मा राई र तेस्रो ओजस्वी निरौला भएका छन् । दुबै गु्रपका प्रथम, दोस्रो र तेस्रोलाई गरिमाका प्रबन्ध निर्देशक एवं नृत्य निर्देशक मणिकुमार लिम्बुले पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र बितरण गरेका छन् । यसैगरी प्रतियोगिताको १६ जना प्रतियोगिहरु लाई पनि प्रमाण पत्र बितरण गरिएको थियो । प्रतियो
धरान/ धरानबाट पानवारी जाँदै गर्दा यस्तो स्थान आउँछ, जहाँ एक पटक टक्क अडिन मन लाग्छ अनि गोजीबाट मोवाइल झिकेर खिचिक्क फोटो खिच्न मन लागि हाल्छ ।यो स्थानले सवैको मन लोभ्याउँछ र एक छिन अडिएर त्यहाँको हरियाली दृष्यलाई पनि कैद गर्न मन लागि हाल्छ । अनि फोटो फेसवुकमा पोष्ट्याउन हतारो हुन्छ । जुन रोड जंगल वारपार गर्ने त्यहीँ रोड धरानकै भाइरल रोड रातारात वन्दैछ । मनै लोभ्याउने र सुन्दर, शान्त, हरियाली वातावरणले साँच्चै स्वर्गीय अनुभुति दिलाउँछ । वच्चाहास्े, युवा–युवती, वृद्ध–वृद्धा जो कोहीको मनै लाभ्याउँछ । धरान १५ स्थित रम फ्याक्ट्रीदेखि जंगल झिर्ने वितिकै उक्त सडकमा पुगिन्छ । धरान&nd
प्रकाशित मितिः माघ ११, २०७८
नाटकघर निर्माण अन्यौल: ‘स्थानीय सरकारले अपनत्व लिएन’
धरान/ प्रदेश एकका कलाकारहरुले गौरबको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको नाटकघर बनाउने योजना बजेट सुनिश्चित नहुँदा अन्यौलमा परेको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले अपनत्व नलिदा दुई वर्ष अघि देखि शुरु भएको धरानमा निर्माणाधिन नाटकघर अहिले अन्यौलमा परेको छ । धरान स्थित सभागृह परिषरमा दुई कट्ठा क्षेत्रफलमा नाटकघर निर्माणको काम अघि बढेको थियो । अहिले कुनै पनि सरकारी निकायबाट बजेट सुनिश्चित नभए पछि निर्माण कार्य ठप्प बनेको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले वेवास्ता गर्दा प्रदेशकै कलाकारहरुले गौरबको रुपमा लिएको योजना अलपत्र बनेको नेपाल चललित्रकर्मी महासंघका प्रदेश नम्बर एक संयोजक समेत रहेका नाटकघर निर्माण उ
धरान । नेपालकी चर्चित पप गायीका शिवानी मोक्तानले शुक्रवार धरान १५ स्थित वगरकोटमा प्रस्तुती दिने भएकी छिन् । खुकुरी म्युजिक नेसनको सहयोगमा उनलाई एमएच लाउन्ज एण्ड वारले वगरकोटमा ल्याएको हो । नाइटलाइफको लागि पुर्वकै चर्चित स्थलको रुपमा विकसित वन्दै गइरहेको वगरकोटको पर्यटन प्रर्वद्धन गर्नका लागि राष्ट्रिय कलाकार सिवानि मोक्तानलाई प्रस्तुतिका लागि ल्याइएको वगरकोट व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष एवं एम एच लाउन्जका प्रोपराइटर जिवन मन्या¨वोले वताए । उनले भने, ‘वगरकोटमा रमाइलो गर्न आउनेहरुलाई मध्यनजर गरेर हरेक महिना चर्चित कलाकारहरु ल्याउने गरेका छौ, केहि समय अघि पनि एमएचले सविन राई एण्ड द फर
विजय वाम्बुलेको ‘किराती हामी’ सार्वजनिक
धरान/ धरानका उदीयमान गायक विजय वाम्बुले राईको स्वर रहेको ‘किराती हामी’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ ।किराती संस्कारमा आधारित रहेर तयार गरिएको म्युजिक भिडियोको बुधबार एक कार्यक्रम बिच चर्चित गायक डिल्ली फोम्बोले सार्वजनिक गरेका हुन् । साकेला सिलिमा गाइएको ‘किराती हामी’ गितले किरातीहरुको संस्कृतिलाई जोगाउन टेवा पुग्ने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समेत रहेको गायक फोम्बेले बताए । कार्यक्रममा अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बा, नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष जनकऋषि राई लगायतको उपस्थितिमा म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो ।भिडियोको एरेन्ज पावल चाम्लिङले गरेका छन्